Alumina olungumgubo ocolekileyo wenziwe ephantsi sodium calcined umgubo alumina ngokugaya kunye nokulungiswa nzulu.
Uyilo olucetywayo lwelawundi lwenziwa ngokwemigaqo yezempilo nokhuseleko esetyenziswayo kwizityalo zomthengisi ngokubhekisele ekuqineni kobume besinyithi, iipropathi zezinto ezikhutshelayo kunye neemfuno zentsimbi. Umzekelo, ukuhamba kwesinyithi isantya, ukunganyangeki kwe-abrasion kunye neepropati ze-thermal zelining.
Okwangoku, ukufunwa kweemarike ze-aluminium alloy ephezulu kuyanda, kwaye abathengi bokugqibela baneemfuno eziphezulu neziphezulu kumgangatho. Ngokubanzi, olu hlobo lweemfuno zebanga eliphezulu lealuminium alloy luyakhula luye kwinqanaba lokubhabha okubhityileyo, amandla aphezulu, kulula ukuqhubekeka. Eli bango lokucoceka kwangaphambili kwe-aluminium ingxubevange iya isiba nzima ngakumbi.
Kukuhamba okuthile kwegesi ye-inert (i-nitrogen okanye i-argon) okanye igesi exubeneyo (iargon-chlorine okanye i-nitrogen-chlorine body gas) kwi-aluminium etyhidiweyo, ngokusebenzisa irotor ejikelezayo okanye umbhobho wegesi kwi-aluminium etyhidiweyo kwiibhamu ezincinci, kwaye isasazeka ngokufanayo kwialuminium engamanzi. I-Hydrogen kwi-aluminium etyhidiweyo ihlala isasazeka kwiibhabhu ze-inert, kwaye njengoko amaqamza erhasi enyukela kumphezulu we-aluminium etyhidiweyo, injongo yokususa i-hydrogen kunye ne-slag iyafezekiswa.